ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အလွန်အမင်းကြောက်စိတ် ၁၀မျိုး (Vocabulary Lesson) - Myanmar Network
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အလွန်အမင်းကြောက်စိတ် ၁၀မျိုး (Vocabulary Lesson)
Posted by Betty on August 25, 2015 at 11:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ပိုးကောင်မွှားကောင်တွေကို ကြောက်တတ်တဲ့စိတ် ရှိနေသလား။ မြွေတွေကိုရော ကြောက်တတ်လား။ အမျိုးသားစိတ်ကျန်းမာရေးဌာန၏ အဆိုအရ တစ်စုံတစ်ခုကို အလွန်အမင်းကြောက်စိတ်ဟာ အရွယ်ရောက်သူ၏ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာရှိနေတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ သီအိုရီအပါအ၀င် အလွန်အမင်းကြောက်စိတ်ဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေ အလွန်အမင်းကြောက်တဲ့ရောဂါဟာ စဉ်းစားသိမြင်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတရားနှင့် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ ကုထုံးနည်းလမ်းတွေဖြင့် ကုသ၍ရနိုင်သော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ဘာကို အကြောက်ဆုံးလဲ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကြောက်လွန်ခြင်း ၁၀မျိုးကြောင့်ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ခေါင်းမူးမယ်၊ အော့အန်မယ်၊ အသက်မရှူနိုင်အောင်ဖြစ်မယ် ဆိုတာတွေပါပဲ။
အချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ ဒီရောဂါ လက္ခဏာတွေဟာ ပိုမိုဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ ကြောက်ရွံခြင်း ခံစားချက်တွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်တတ်ခြင်းတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ အခြားအခြေအနေ တစ်ခုခုကြောင့် ခံစားရတတ်တာပါ။
၁။ Arachnophobia - ပင့်ကူကြောက်ရောဂါ။ ဒီကြောက်ရွံမှုဟာ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
၂။ Ophidiophobia - မြွေကြောက်ရောဂါ။ ဒီရောဂါဟာ မွေးရာပါသန္ဓေစိတ်၊ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးခံရခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ကြောက်လန့်မှုရောဂါပါ။
၃။ Acrophobia - အမြင့်ကြောက်တဲ့ရောဂါ။ ဒီရောဂါကြောင့် ပြင်းထန်စွာ စိုးရိမ်စိတ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အမြင့်တွေကို ရှောင်ရှားတတ်တဲ့ရောဂါပါ။
၄။ Agoraphobia - ရုန်းထွက်ဖို့ခက်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ကြောက်တဲ့ရောဂါ။ လူစည်ကားတဲ့နေရာ၊ လူတွေအများကြီး ရောက်နေတဲ့နေရာ တွေကြောင့် ထိတ်လန့်မှုကို ခံစားရစေတဲ့ရောဂါပါ။ အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ရှိသူတွေဟာ လူစုလူဝေးကိုရှောင်ရှားရန်နဲ့ အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်တဲ့ အဖြစ်မျိုးအထိ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ Panic attack လို့ခေါ်တဲ့ ရုတ်တရက်ကြောက်စိတ်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ လူတွေအားလုံးရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ဟာ ဒီကြောက်လန့်မှု ဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
၅။ Cynophobia - ခွေးကြောက်တဲ့ရောဂါ။ ဒီရောဂါဟာ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀က ခွေးကိုက်ခံခဲ့ရခြင်းစတဲ့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်ခံစားမှု အတွေ့အကြုံတွေကြောင့် ခံစားရတတ်တဲ့ ကြောက်စိတ်ရောဂါပါ။
၆။ Astraphobia - မိုးခြိမ်းသံနှင့် လျှပ်စီးလက်တာကို ကြောက်ခြင်း ။ ဒီရောဂါကို Brontophoia၊ Tonitrophobia၊ Ceraunophobia စသဖြင့်လဲ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
၇။ Trypanophobia - ဆေးထိုးခံရမှာကို ကြောက်သောစိတ်။ အခြားသော ကြောက်စိတ်ရောဂါတွေလိုပါပဲ ဒီရောဂါရှိသူတွေဟာ အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကို ရှောင်ရှားတတ်သောကြာင့် ကုသဖို့ခက်ခဲပါတယ်။
၈။ Social Phobias - လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို ကြောက်သောရောဂါ။ ဒီရောဂါဖြစ်ပုံကတော့ ရောဂါခံစားရသူဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာတဲ့အခါ အခမ်းအနားတွေ၊ နေရာတော်တော်များများနဲ့၊ လူတွေကို စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ ရှောင်ရှားလာတာပါပဲ။
၉။ Pteromerhanophobia - လေယာဉ်စီးရမှာကို ကြောက်ခြင်း။ ရောဂါခံစားရသူဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လေယာဉ်စီးခြင်းနဲ့ ရင်းနှီးလာအောင် စိတ်ဖွင့်ကုထုံးနဲ့ ကုသပေးလို့ရပါတယ်။
၁၀။ Mysophobia – ပိုးမွှားနှင့် အညစ်အကြေးကြောက်သောရောဂါ။ တစ်စုံတစ်ခုကို မလုပ်ပဲမနေနိုင် အထပ်ထပ်ပြုလုပ်တတ်တဲ့ရောဂါနဲ့ ဆက်နွယ်နိုင်သည့် ကြောက်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Psychology.about.com မှ 10 Common Phobias ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးကောငျမှားကောငျတှကေို ကွောကျတတျတဲ့စိတျ ရှိနသေလား။ မွှတှေကေိုရော ကွောကျတတျလား။ အမြိုးသားစိတျကနျြးမာရေးဌာန၏ အဆိုအရ တဈစုံတဈခုကို အလှနျအမငျးကွောကျစိတျဟာ အရှယျရောကျသူ၏ ၁၀ရာခိုငျနှုနျးခနျ့မှာရှိနတေယျ ဆိုတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဆငျ့ကဲဖွဈစဉျနှငျ့ အမူအကငျြ့ဆိုငျရာ သီအိုရီအပါအ၀ငျ အလှနျအမငျးကွောကျစိတျဟာ ဘာကွောငျ့ဖွဈရတယျဆိုတာကို ရှငျးလငျးဖျောပွထားတဲ့ ဖျောပွခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။
ဘာကွောငျ့ပဲဖွဈပါစေ အလှနျအမငျးကွောကျတဲ့ရောဂါဟာ စဉျးစားသိမွငျခွငျးဆိုငျရာ သဘောတရားနှငျ့ အမူအကငျြ့ဆိုငျရာ ကုထုံးနညျးလမျးတှဖွေငျ့ ကုသ၍ရနိုငျသော ရောဂါတဈခုဖွဈပါတယျ။ လူတှဟော ဘာကို အကွောကျဆုံးလဲ။ အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့ အကွောကျလှနျခွငျး ၁၀မြိုးကွောငျ့ဖွဈလာတတျတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေတော့ ခေါငျးမူးမယျ၊ အော့အနျမယျ၊ အသကျမရှူနိုငျအောငျဖွဈမယျ ဆိုတာတှပေါပဲ။
အခြို့ကိစ်စတှမှောတော့ ဒီရောဂါ လက်ခဏာတှဟော ပိုမိုဆိုးဝါးပွငျးထနျတဲ့ ကွောကျရှံခွငျး ခံစားခကျြတှကေို ခံစားရတတျပါတယျ။ ဒီလိုကွောကျရှံ့ ထိတျလနျ့တတျခွငျးတှဟော ပတျဝနျးကငျြ၊ တိရိစ္ဆာနျနဲ့ အခွားအခွအေနေ တဈခုခုကွောငျ့ ခံစားရတတျတာပါ။
၁။ Arachnophobia - ပငျ့ကူကွောကျရောဂါ။ ဒီကွောကျရှံမှုဟာ အမြိုးသားတှထေကျ အမြိုးသမီးတှမှော ပိုအဖွဈမြားပါတယျ။
၂။ Ophidiophobia - မွှကွေောကျရောဂါ။ ဒီရောဂါဟာ မှေးရာပါသန်ဓစေိတျ၊ လူတဈဦးခငျြးရဲ့ အတှအေ့ကွုံနဲ့ ယဉျကြေးမှုဆိုငျရာ လှမျးမိုးခံရခွငျးတှကွေောငျ့ဖွဈလာတဲ့ ကွောကျလနျ့မှုရောဂါပါ။
၃။ Acrophobia - အမွငျ့ကွောကျတဲ့ရောဂါ။ ဒီရောဂါကွောငျ့ ပွငျးထနျစှာ စိုးရိမျစိတျခံစားရနိုငျပါတယျ။ အမွငျ့တှကေို ရှောငျရှားတတျတဲ့ရောဂါပါ။
၄။ Agoraphobia - ရုနျးထှကျဖို့ခကျတဲ့ အနအေထားတဈခုကို ကွောကျတဲ့ရောဂါ။ လူစညျကားတဲ့နရော၊ လူတှအေမြားကွီး ရောကျနတေဲ့နရော တှကွေောငျ့ ထိတျလနျ့မှုကို ခံစားရစတေဲ့ရောဂါပါ။ အဲ့ဒီကွောကျစိတျရှိသူတှဟော လူစုလူဝေးကိုရှောငျရှားရနျနဲ့ အိမျထဲကအိမျပွငျမထှကျတဲ့ အဖွဈမြိုးအထိ ရောကျသှားနိုငျပါတယျ။ Panic attack လို့ချေါတဲ့ ရုတျတရကျကွောကျစိတျဖွဈလရှေိ့တဲ့ လူတှအေားလုံးရဲ့ သုံးပုံတဈပုံလောကျဟာ ဒီကွောကျလနျ့မှု ဝေဒနာ ဖွဈပျေါလာတတျပါတယျ။
၅။ Cynophobia - ခှေးကွောကျတဲ့ရောဂါ။ ဒီရောဂါဟာ ငယျစဉျကလေးဘ၀က ခှေးကိုကျခံခဲ့ရခွငျးစတဲ့ တဈဦးခငျြးစီရဲ့ စိတျခံစားမှု အတှအေ့ကွုံတှကွေောငျ့ ခံစားရတတျတဲ့ ကွောကျစိတျရောဂါပါ။
၆။ Astraphobia - မိုးခွိမျးသံနှငျ့ လြှပျစီးလကျတာကို ကွောကျခွငျး ။ ဒီရောဂါကို Brontophoia၊ Tonitrophobia၊ Ceraunophobia စသဖွငျ့လဲ ချေါဝျေါကွပါတယျ။
၇။ Trypanophobia - ဆေးထိုးခံရမှာကို ကွောကျသောစိတျ။ အခွားသော ကွောကျစိတျရောဂါတှလေိုပါပဲ ဒီရောဂါရှိသူတှဟော အဲ့ဒီအခွအေနတှေကေို ရှောငျရှားတတျသောကွာငျ့ ကုသဖို့ခကျခဲပါတယျ။
၈။ Social Phobias - လူမှုရေးဆိုငျရာ အခွအေနတှေကေို ကွောကျသောရောဂါ။ ဒီရောဂါဖွဈပုံကတော့ ရောဂါခံစားရသူဟာ ပိုမိုပွငျးထနျလာတဲ့အခါ အခမျးအနားတှေ၊ နရောတျောတျောမြားမြားနဲ့၊ လူတှကေို စိုးရိမျစိတျတှနေဲ့ ရှောငျရှားလာတာပါပဲ။
၉။ Pteromerhanophobia - လယောဉျစီးရမှာကို ကွောကျခွငျး။ ရောဂါခံစားရသူဟာ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ လယောဉျစီးခွငျးနဲ့ ရငျးနှီးလာအောငျ စိတျဖှငျ့ကုထုံးနဲ့ ကုသပေးလို့ရပါတယျ။
၁၀။ Mysophobia – ပိုးမှားနှငျ့ အညဈအကွေးကွောကျသောရောဂါ။ တဈစုံတဈခုကို မလုပျပဲမနနေိုငျ အထပျထပျပွုလုပျတတျတဲ့ရောဂါနဲ့ ဆကျနှယျနိုငျသညျ့ ကွောကျစိတျဖွဈပါတယျ။
Psychology.about.com မှ 10 Common Phobias ကို ကိုးကားဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by Phyo Ei Hlaing on August 25, 2015 at 13:09
Thanks for Vocabulary enhancement!!!
Permalink Reply by Zonthiyar on August 25, 2015 at 20:22
Permalink Reply by Theint Thu on August 26, 2015 at 18:09
Permalink Reply by Aye Nyein on August 27, 2015 at 15:31
အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် ။afraid ofအပြင်သုံးစရာလေးတွေရှိတာပါသိခွင့်ရလို့
Permalink Reply by Ei Toe Zon on August 28, 2015 at 13:16
Permalink Reply by Aye Myat Mu on August 29, 2015 at 10:53
Thank you for sharing vocabulary
Permalink Reply by Pyae Phyo Aung on August 31, 2015 at 11:05
I'm no. 7
Permalink Reply by nyeinthetko on September 9, 2015 at 10:04
Permalink Reply by Aung Ko Zaw on September 28, 2015 at 10:52
Permalink Reply by Naw Say Phaw on April 15, 2016 at 9:10
I'm no 6